Global Voices teny Malagasy » Shina: Fandraràna Ny Kolontsaina Shanzhai ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Fandraràna Ny Kolontsaina Shanzhai ?
Voadika ny 07 Febroary 2018 2:44 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Tao amin'ny fihaonana vao haingana nataon'ny CPCC, nalefan'i Ni ping (倪萍), mpiantsehatra malaza amin'ny fahitalavitra CCTV no sady mpikambana ao amin'ny Kaomity Nasionalin'ny Kaonferansa Fakankevitra Politikan'ny Vahoaka Shinoa (CPPCC) ho lasa lavidavitra kokoa ilay sosokeviny handraràna ilay “zava-mahatalanjona Shanzhai” （山寨現象.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, lasa nalaza teny anivon'ireo mpampiasa aterineto ny fomba fiteny hoe Shanzhai. Noraisin'i Lao Meng ny fanapahankevitra hikarakara ety anaty aterineto ny Gala Shanzhai rehefa Lohataona. Na izany aza, noho ny tsindry tsy fantatra , nosakanana ny fanomanana an'ilay hetsika ary nangatahan'ny Fitantanam-panjakana misahana ny Tantara amin'ny Fampielezampeo sy ny Fahitalavitra (SARFT) ire fampahalalambaovao rehetra mba hitsahatra tsy hanao tatitra momba ny Gala Shanzhai.
Kanefa, mitohy miroso hatrany ny kolontsaina Shanzhai. Satria efa miha-manakaiky ny Gala ny 15 Martsa (3.15 晚會) karakarain'ny fandaharana natokana ho an'ny fanjifàna ao amin'ny fahitalavitra CCTV , mpikatroka iray mpiaro zon'olombelona, Zhang Hongfeng (張洪峰, no nanapaka hevitra ny hanao Gala Shanzhai ny 15 Martsa. Nolazain'i Zhang fa ho avoakany ny fanadihadiana iray nataon'ny ‘people’ (tao amin'ny people.com.cn ) an'ireo mpanjifa momba ireo vokatra sandoka ao anatin'ny Gala Shanzhai.
Ny sosokevitr'i Ni Ping handràra ny kolontsaina sy ny zava-mahatalanjona Shanzhai dia toy ny manome fankatoavana ofisialy bebe kokoa ny fibahanana ireo fandraisana andraikitra etsy ambony ireo. Tao anatin'ny andro vitsy lasa, lasa lohahevitra mafàna ilay sosokevitr'i Ni ary niteraka adihevitra sy fifanakalozankevitra marobe .
Ny fomba fiteny hoe Shanzhai dia manana dikany isankarazany, miainga amin'ny hoe tanàna mitam-piadiana any an-tendrombohitra, tonga amin'ny hoe toerampiasàna kely ao an-tokantrano, sy famokarana hosoka / hala-tàhaka. Notsindrian'i Ni Ping fa ny hala-tàhaka no tiana ambara amin'ny Shanzhai, kanefa, noho izy miasa ho mpanolotra ny Fetibe Gala Lohataona ao amin'ny CCTV, mampametra-panontaniana ihany ny famaritany ny hala-tàhaka (satria lavitry ny hala-tàhaka ny Gala Shanzhai). Fanampin'izany, ny fanentanana iray vao haingana manohitra ny fiteny mivantambantana dia nivadika ho sivana politika, lasa horohoro iray hafa ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto ny fanentanana manohitra ny Shanzhai.
Araka ireo tatitry ny vaovao avy ao an-toerana, nandritry ny fihaonan'ny CPPCC, mbola nandroso sosokevitra 7 hafa i Ni Ping mba hanakànana ny kolontsaina Shanzhai, ary nolazainy fa (tao amin'ny Tianya forum ):
Feno fahavononana aho hanohitra ny kolontsaina Shanzhai, ary raha ny hevitro, tokony hazava tsara ny lalàna mifehy azy io. Amin'izao androntsika izao, tena andairan'ny kolontsaina Shanzhai ny tanora, ny eritreretin-dry zareo dia hoe io ilay antsoina hoe “kolontsaina miainga ifotony”. Kanefa, isika tokony hanome fanabeazana salama / mendrika ho an'ny tanorantsika momba ny tsy manam-paharoa sy ny faikany, ny marina sy mahafinaritra, ny diso sy ny mahatsiravina.
Tena sarotra ongotana raha ny lamaody “Shanzhai”, hitanao mameno ny aterineto izy io. Amin'izao fotoana izao izay ahafahan'ny tanora marobe miditra amin'ny aterineto, tsy hain-dry zareo intsony ny manavaka izay tsy manampaharoa (tena izy) sy ny faikany / sandoka. Faikany ny ankamaroan'ny “kolontsaina shanzhai”, hala-tàhaka sy fijirihana. Fa ny tena mampihoron-koditra kokoa dia filazana ireny vokatra “shanzhai” ireny ho mpisolo tena ny kolontsaina eny ifotony, nefa raha ny marina, zavatra nojirihana sy nalaina tàhaka fotsiny izy ireny.
Tsy olana goavana ireo olomalaza natao “shanzhai-ed” (midika hoe naverina novokarina). Ny olana atrehana izao dia ny fijirihana (fanaovana hosoka). Mba hanakanana ny kolontsaina “shanzhai” sy ny ” zava mahatalanjona shanzhai”, tsy maintsy ampiharintsika ny fomba araka ny lalàna sy ara-pitantanana, amin'ny alàlan'ny famoronana fomba fijery iraisan'ny daholobe.
Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasantsasany tao amin'ilay lahatsoratr'i Tianya
Ny bika vaovaony “hodimaso roa sosona Shanzhai ” no tokony hiasan'ny lohan-dramatoa Nit .
Zavabita tena mahazatra fanaon'ireo solotena mpilalao ravim-body io. Mba hiarovana ny asa ve? Tsy hainy hoe firy no isan'ireo mpiasa ampiasaina any amin'ireo ozinina Shanzhai. Ahoana no ahafahany manome sosokevitra aminà zavatra izay hitondra vokany tena mifanohitra tanteraka mihitsy.
Olana roa samihafa ny Shanzhai sy ny fanaovana hosoka.
Mora ny mamono ny ADIDSA, saingy ho sarotra ny hamono ny Fetibe Gala Lohataona.
好江山的人 vahoakan'ny firenena Goavana:
Ni Ping, aza manahy, tsy misy na iray aza hanao Shanzhai anao
Fa dia ahoana no tsy ahatakaranao kely akory ny fotokevitry ny “famelàna ireo voninkazo an'arivony hivelatra”
CCTV tafahoatra loatra ianao!
你很低俗 Olona kivalavala ianao:
Demaokrasia Shanzhai tandrefana no misy eto amintsika, nefa nataon'ny demaokrasia tandrefana shanzhai ny repoblikan'ny Fitondram-panjaka Zhou teto amintsika. Finday tandrefana natao shanzhai no eto amintsika, fitaovana nokleary natao shanzhai no eto amintsika, saingy tsy vitantsika ny manao shanzhai ny Fetibe Gala Lohataona.
春心曉夢 Nofinofy marainan-dohataona:
Amin'izao androntsika izao, afaka fotsiny manome sosokevitra momba ny vary sy ny tay ireo solotena, tsy misy olona ho sahy hanolotra fepetra hanoherana ny kolikoly. Dia manontany tena aho hoe iza no soloin-dry zareo ireo tena?
Teo amin'ny tantarantsika, ny tafibahoaka no tafika ara-dalàna, raha ny tafiky ny vondro-piarahamonina kosa no tafika “Shanzhai”!
百萬夢想 nofinofy an-tapitrisa:
Alefaso e, dia rarao, aoka tsy ho antsointsika intsony hoe Shanzhay avy eo, fa azontsika omena anarana hoe Nuzhai, Tianzhai, na inona na inona dia mety daholo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/07/114668/
 tsindry tsy fantatra: https://globalvoicesonline.org/2009/02/05/china-shanzhai-spring-festival-blocked
 Tianya forum: http://www.tianya.cn/publicforum/content/news/1/118570.shtml